माओवादी हविगत र कुकुरको पुच्छर !
Monday, 12 Dec, 2016 10:00 AM
‘कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्षसम्म ढुंग्रोमा राख्यो बाङ्गोको बाङ्गै,’ नेपाली समाजमा चल्तीको यो टुक्कासँग अहिले ठ्याक्कै मिल्ने गरी माओवादीको तुलना गर्न मिल्छ । माओवादीका पुच्छरहरु धेरै पुगेका छन् । तर, ढुंग्रोमा राखेर हेर्दा एउटा पनि सिधा हुन सकेको छैन । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १० वर्ष पुगिसकेको छ । यो बीचमा उनीहरु धेरै बदलिए । तर, त्यो परिवर्तनलाई कुकुरको पुच्छर सिधा भएको मान्न सकिन्न् । माओवादीहरु कुकुरको पुच्छरभन्दा पनि झन बाङ्गो हुँदै गएका छन् । सायद माओवादीले ढुंग्रोको प्रयोग पुच्छर सिधा बनाउन भन्दा पनि झन बाँगो बनाउन गरिरहेका छन् ।
संसार परिवर्तन गर्न भनेर सिकाइने कामरेडी अभिवादन अहिले ढुंग्रोमै हराएका छन् । त्यसैले त धेरैजसो माओवादीका कार्यकर्ताले अहिले ‘कोशी किनारमा बालुवा चाल्न’ पनि डराउनु पर्ने अवस्था छ । धेरैले माओवादीलाई टोलको भुस्याहा कुकुरसँग तुलना गर्छन् । उनीहरुको भाषामा ‘माओवादीहरु निद्रा विथोल्न मात्रै भुक्छन्, चोरका अगाडि लुसुक्क हुन्छन् ।’ माओवादीहरुले त यसलाई १० वर्षे उपलब्धिको रुपमा पनि हेर्छन होला । हुन पनि उनीहरु अहिले भुक्न सक्ने अवस्थामा मात्रै छन् । टोक्न चाहिने दाह्रा त छिया छिया भइसके । पहिलो गणतन्त्र सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र अहिलेका प्रधानमन्त्रीबीच तुलना गर्दा दारा हराएको प्रस्ट देखिन्छ । अचेल प्रचण्ड कार्यकर्तालाई चुप लाग्ने कला सिकाउँदै छन् । सायद उनी सोच्दा हुन््, ‘हर कुत्तेका दिन आता हे, फेरि हाम्रो पनि कसो नआउला ।’
भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नेहरु अहिले सिरानीमा नरेन्द्र मोदीको फोटो राखेर सुत्ने गर्छन् । उनीहरु कांग्रेसका बिमलेन्द्र निधिभन्दा पनि अगाडि उभिएर भारतभक्ति देखाउँदै छन् । त्यसैले त केपी ओलीहरुलाई राष्ट्रवादको गीत गाउनु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ । माओवादीहरुले दलित, जनजाती, अल्पसंख्यकलगायत हेपिएका र दवाइएकाहरुका भावना भुलिसकेका छन् । त्यसैले त राजेन्द्र महतोहरु खाटी क्रान्तिकारी कहलिएका छन् ।
सुनिन्छ अहिले एकथरी माओवादी फेरि नयाँ विश्व रेकर्ड कायम गर्ने अभियानमा छन् । ४ हजारभन्दा १ कम केन्द्रीय सदस्य बनाउने सायद माओवादी पहिलो ऐतिहासिक पार्टी होला । अरुको त हिम्मत पनि हुनु पर्यो ! उहिले जनयुद्ध लडेको शक्तिको अहिले नयाँ प्रयोग गरिरहेका छन्, विभिन्न पुच्छरमा विभाजित माओवादीहरुले । एकथरि माओवादीहरु पुरानो सीपलाई प्रयोग गरेर नयाँ तरिकाबाट आम्दानी गर्ने ध्याउन्नमा छन् । उनीहरु टावर ताक्दै डुङ्गा वार्साउँछन्, अनि फोन गरेर रकम तोक्छन् । धम्की दिने नयाँ फर्मूलाहरुको विकास गर्ने कोर्श अध्ययन पनि जारी छ ।
चियापसलका बुद्धिजीविहरु माओवादी त अब तेस्रो पार्टी पनि बन्न मुश्किल छ भन्ने विश्लेषण सुनाउँछन् । तर, उनीहरुलाई के थाहा, जावो चुनावमा तेस्रो हुँदैमा के भयो र ! माओवादीका कमरेडहरु धेरै कुरामा प्रथम भइसकेका छन् । १० वर्षमा कसैबाट हुन नसक्ने काम माओवादीबाट भएका छन् । जनयुद्धका बेला उठाइने पहिचानका कुरा कागजमा सुकाइएका छन् । त्यसैले त लेखराज र टोपबहादुरहरु क्षेत्रीयताका पक्षमा छाती फुलाएर बोल्छन् । उनीहरुलाई देश हैन आफ्नो क्षेत्र अखण्ड चाहिन्छ । अनी प्रचण्डहरुलाई अरुको बाल मतलव छैन, आफू र आफ्नो परिवार सुखी र खुशी बनाउनु छ । पैतृक सम्पत्ति बेचेर पार्टीलाई चन्दा दिएका धेरै माओवादीहरु अहिले संसारमा छैनन् । भएकाहरु पनि काली, कर्णालीका किनारमा गिट्टी कुटदैछन् । तर, चैते घाममा पलाएका माओवादीहरु प्लेन चार्टर गरेर घर जाने भएका छन् । उनीहरुका भुँडी फुलेका छन् । चिया पसलका बुद्धिजीविहरुलाई के थाहा माओवादीले धेरै प्रगति गरिसक्यो । उनीहरुलाई चुनावी मतपरिणामले कुनै असर गर्दैन ।
बाबुरामहरुको नजरमा त माओवादी भन्ने घर गतवर्षको भूकम्पमा परेर ध्वस्त भइसक्यो । बाँकी रहेको अवशेष दुईचार वर्षातपछि बगेर जानेछ । उनले बबरमहलतिर नयाँ जग हालेका छन् । पेरिसडाँडा हल्लाउने भूकम्पले बबरमहलको घर सुरक्षित राख्ला भन्ने के ग्यारेन्टी ? किनकी इँटा र प्रविधि त पुरानै घरको छ । ‘किरण’हरुमा न त ज्योती छ, न प्रकाश नै । विप्लवहरुको सपना मुडा खोज्ने छेपाराको जस्तै छ । चिसो रातमा भोली मुडा ल्याइन्छ भन्छन्, घामको तात्न थालेपछि निदाएर दिन कटाउँछन् । त्यसैले माओवादीलाई अहिले सकेजति छुट्टिनु छ, टुक्रिनु छ । एकहिसावले माओवादीहरुबीच अहिले डेरा सर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । थाहा छैन कुन दिन काठमाडौंका घरपेटीले ‘भाडा नदिएको’ भन्दै लेखेट्छन् ।
शान्ति प्रत्रियामा आएको १२ वर्षपछि माओवादीको पुच्छर सिधा होला ? माओवादीप्रति आशावादीहरुमा एकप्रकारको जिज्ञासा छ । तर, प्रचण्ड, बाबुराम, किरण र विप्लवहरुले त्यो आवश्यकता बोध गरेका छैनन । माओवादी ढुंग्रोमा हालेर सिधा हुने पुच्छर हैन । बरु ढुंग्रोलाई नै बाङ्गो बनाउने क्षमता देखाउँछ । जतिसुकै बाङ्गो भएपनि आवश्यक परे कुकुरले आफ्नो पुच्छर लुकाउन सक्छ, माओवादीमा पनि त्यो कला छ । त्यसैले माओवादीको हविगत कुकुरको पुच्छरसँग तुलना गरिएको हो ।